EPS စက်ရုံ China EPS စက်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
Epp / Etpu / Epo စက်
အော်တို Epp / Etpu / Epo စက်ယန္တရား
အော်တို Pre- ချဲ့ထွင်
အော်တို Eps Shape မှိုစက်
အော်တို Eps Block ကိုမှိုစက်
Eps Recycle စနစ်
Eps / Epp မှို
Eps / Epp ကုန်ကြမ်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အော်တို EPP / ETPU / EPO စက်
၂။ PLC နှင့် touch screen control ကို အသုံးပြု၍ အလိုအလျောက် run ပါ။
3. အားကြီးသော Hopper ပါဝင်သည်။
7. အနိမ့်သိပ်သည်းဆထုတ်ကုန်နှစ် ဦး စလုံးလုပ်သင့်လျော်သည်။
Auto Vacuum Block မှိုစက် PSB2000-6000Z
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် 4. ထိရောက်သောလေဟာနယ်။
8. အနိမ့်သိပ်သည်းဆနှင့်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆထုတ်ကုန်နှစ် ဦး စလုံးလုပ်သင့်လျော်သည်။
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ ၁။ ပစ္စည်းကိရိယာတွင်ကိုယ်ထည်သည်ခိုင်ခံ့သောသံမဏိကိုအသုံးပြုသည်။ စက်သည်ခိုင်ခံ့သောတည်ဆောက်ပုံရှိခြင်း၊ သံချေးမသွားခြင်းနှင့်စက်၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကိုအပူချိန်ညှိခြင်း၊ သုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်သံမဏိများကိုအတူတကွဂဟေဆော်သည်။ Schneider တို့ထိဖန်သားပြင်ထိန်းချုပ်မှု။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်သည်။ ၃.၃ ဖိအားမြင့်မားသောအစာကျွေးခြင်းစနစ်ဖြင့်မှို၊ မှိုများကိုအစာကျွေးခြင်း၊ စက် ၃၆ လုံးတပ်ဆင်ထားသောသေနတ်များတပ်ဆင်နိုင်သည်။
SPY70 \_ 90 \_ 120 စဉ်ဆက်မပြတ် Pre- ချဲ့ထွင်
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ ၁။ အစာကျွေးခြင်း၊ ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ Silo များသို့အလိုအလျောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း။ ၂။ ပထမနှင့်ဒုတိယတိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်ပထမအကြိမ်အကြိမ်ရေကူးပြောင်းခြင်းအစာကျွေးသောကိရိယာကိုအသုံးပြုသည်။ အစာကျွေးခြင်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုအာမခံသည်။ ၃၅ ဂရမ် / ဌ ၄။ သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအပူချိန်နှင့်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အလို့ငှာသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပရှိပစ္စည်းစည်အခြောက်ခံစက်။ ၅။ လျှပ်စစ်ကာကွယ်ရေးကိရိယာ 6. ဂျပန်လျှော့ချရေးအဆို့ရှင်။
SPJ50 \_ 70 \_ 110 \_ 130 \_ 150 \_ 150 \_ 160 အလိုအလျောက်သုတ်ထားသော EPS ကြိုတင်ချဲ့ထွင်ခြင်း
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ ၁။ အစာကျွေးခြင်း၊ ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ Silo များသို့အလိုအလျောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း 2. တိကျသောအပူရရှိစေရန်ဖိအားလျှော့ချနိုင်သောအဆို့ရှင်နှင့် Angle ထိုင်ခုံအဆို့ရှင် ၃။ ကျွေးမွေးခြင်းစနစ်တွင်အီလက်ထရောနစ်အလေးချိန်စနစ်၊ ပစ္စည်းအဆင့်အာရုံခံကိရိယာထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ အမြှုပ်များကစွမ်းအင်မြှင့်နိုင်ခြင်း၊ အမြှုပ်များညီတူညီမျှ ၄.၄ PLC Controller နှင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြု၍ တိကျသောအလိုအလျောက်လည်ပတ်မှုရရှိနိုင်သည်။ သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစာကျည်စည်။ လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ, အဆို့ရှင် ar ...
အဓိကအသွင်အပြင်များ 1. စက်တွင် A အမျိုးအစားစက်၏အားသာချက်များ၊ ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်ထရန်စဖော်မာ၊ အမြန်နှုန်းကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။ device ကိုထိန်းညှိ။ များစွာသောဝါယာကြိုးများအတူတကွဖြတ်တောက်သည်၊ မြန်နှုန်းနှင့်ဗို့အားချိန်ညှိနိုင်သည်။
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ ၁။ စက်ကိုယ်ထည်သည်စတုရန်းပြွန်နှင့်သံမဏိများကိုအသုံးပြုသည်။ ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ လှပသောအသွင်အပြင်ရှိခြင်း။ စတုရန်းပြွန်နှင့်သံမဏိကိုအသုံးပြုသည်။ အလျားလိုက်၊ ဒေါင်လိုက်နှင့်ဖြတ်တောက်နိုင်သောစက်ရှိသည်။ ညှိနှိုင်းနိုင်၊ ချောချောမွေ့မွေ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆူညံသံနိမ့်ကျမှု ၄ ။
CNC ဖြတ်စက် PSC2000-4000D
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ ၁။ ခိုင်ခံ့သောသံမဏိများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအဓိကဘောင်နှင့်အထူးတပ်ဆင်ထားသောအရာဝတ္ထုများ၊ တည်ငြိမ်သောလှုပ်ရှားမှု၊ တိကျမှန်ကန်စွာထိန်းချုပ်ခြင်း 2.Machine သည်လှေကားထစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီစက်သည်အထူးဂရပ်ဖစ်များကိုဖြတ်တောက်ရန်၊ တိကျမှန်ကန်မှုကို ၀.၅ မီလီမီတာအထိဖြတ်တောက်ရန်သင့်တော်သည်။ ၃ စက်သုံးစက်သုံးလျှပ်စစ်ထရန်စဖော်မာအားအီလက်ထရောနစ်ဗို့အားထိန်းညှိစက်မှ ၀.-70 ဗို့အားချိန်ညှိနိုင်သောဝါယာကြိုး ၂၀ ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပုံစံများ 4.Machine ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဌာနအရောင်းမန်နေဂျာ John Chen
၂၀၁၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် Welleps ကုမ္ပဏီသည် ...